IDG Myanmar – Innovative Security Solutions
IDG MYANMARအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ထမ္းမ်ား
IDG Myanmar မှာ မြန်မာပြည်တွင်းတွင်လုံခြုံရေးနှင့်သက်ဆိုင်ရာဝင်ဆောင်မှုများ
ENGLISH DOWNLOAD IDG BROCHURE (MM)
“UN အဖွဲ့အစည်းအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေ အတွက်
IDG ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု အလေးထားခြင်း မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတုယူသင့်ပါတယ်”
၂၈ ဧပြီ ၂၀၁၁
IDG Myanmar ၏ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ
IDG Myanmar သည် IDG Group DMCC လက်အောက်မှ ရုံးခွဲဖြစ်သည်။ IDG group မှာ Singapore, Thailand, Myanmar, Nepal, India, Afghanistan, UAE, Iraq, South Sudan, UK စသည်တို့တွင်လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ ရုံးခွဲများဖွင့်လှင့်ထားပါသည်။ IDG Group မှာ Afghanistan ရှိ UN အဖွဲ့များကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်ထဲမှ လုံခြုံရေးများပေးနေပြီး
Corporate လုံခြုံရေးတွင် အတွေ့အကြုံများစွာရှိပါတယ်။
IDG Myanmar အား နိုင်ငံအမျိုးစုံတွင် အတွေ့အကြုံရှိသော Operation အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်ပြီး မြန်မာပြည်တဝန်း တွင် လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများပေးနေပါသည်။
Operation အဖွဲ့တွင် ဗြိတိသျှစစ်တပ်၊အိန္ဒိယစစ်တပ်နှင့် စကာၤပူရဲတပ်ဖွဲ့များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ထားသူများပါဝင်ပြီး IDG Myanmar ရှိ guards များကို training များပေးပြီးကြီးမတ်သည်။
IDG Myanmar ၏ ယုံကြည်ချက်များ
IDG Myanmar သည် Clients များကိုရိုးသားပွင့်လင်းခြင်း၊ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းနှင့် ဈေးနှုန်းယှန်ပြိုင်နိုင်ခြင်းစသည့် အချက်များဖြစ် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးပါသည်။ ထိုနည်းအတူ IDG တွင်လုပ်ဆောင်နေသူများကိုလည်း ဘေးကင်းပြီး အလုပ်အတွေ့အကြုံများတိုးတတ်ရန် အမြဲလုပ်ဆောင်လျှက် ရှိပါသည်။
IDG သည် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စည်မ ျဉ်း စည်းကမ်းများကို (ICOC) Standard နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။ Principles of the Montreux Document နှင့် UN Universal Declaration of Human Rights လိုက်နာပြီး UN Global Compact နှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည်။ ဝန်ထမ်းများအားလည်း လူ့အခွင့်အရေးနှင့်လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီများ၏ ကျင့်ဝတ်များကို သင်ကြားပေးထားသည်။
IDG Myanmar မှာ မြန်မာပြည်ရှိ လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးများအား လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတိုးစေရန် Gender Action Plan ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
IDG Myanmar တွင် အမျိုးသမီးများအား လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်ရန် အခွင့်အရေးများနှင့်ညွှန်ကြားသင်ကြားမှုများပေးနေကာ လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများတွင် အတုယူရန်ဦးဆောင်လမ်းညွှန်နေပါသည်။
IDG Myanmar တွင် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမျိုးစုံ ဝန်ဆောင်မှုများ ကို
လုံခြုံရေး စီမံအုပ်ချုပ်မှု ရေးဆွဲခြင်းများ
ဝန်ထမ်းများနှင့် Suppliers များကို လုံခြုံရေး စစ်ဆေးခြင်း
အဆင့်မြင့်နည်းပညာ လုံခြုံရေး ဖြေရှင်းနည်းများ
အန္ဘရာယ်ရှိ နေရာဒေသများတွင် လုပ်ဆောင်နေသည့် Clients များအတွက် အဆင့်မြင့် လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများပေးသည်။ မြန်မာပြည်တဝှမ်းတွင်လည်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမျိုးဆုံဝန်ဆောင်မှုများပေးနေပါတယ်။
မြန်မာပြည်တွင်း လုံခြုံရေးအခြေအနေများကိုအဆင့်မြင့်နိုင်ငံရေးနှင့်အန္တရာယ် စိစစ်သုံးသပ်ခြင်းများဖြင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးလျှက်ရှိကာ လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများထဲတွင်လည်းထည့်သွင်း၍ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။
Operation အဖွဲ့တွင် ဗြိတိသျှစစ်တပ်၊အိန္ဒိယစစ်တပ်နှင့် စကာၤပူရဲတပ်ဖွဲ့များတွင် နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ထားသူများပါဝင်ပြီး IDG Myanmar ရှိ guards များကို training များပေးပြီးကြီးမတ်သည်။ အချို့လုပ်ငန်းများတွင် အချိန်ပြည့် ဂေါ်ရခါး Supervisor များဖြင့် အကောင်းဆုံးသော်လုံခြုံရေး စီမံကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေပါသည်။
IDG Security ၏ ဟိုတယ်လုံခြုံရေး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုများမှာ လက်တွေ့ဘေးအန္တရာယ်အခြေအနေများတွင် အသုံးပြုခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုရလာဒ်များ ရခဲ့သည် ဖြစ်သည်။
လုံခြုံရေး ကိုယ်ရံတော် ဝန်ဆောင်မှု
ကမ္ဘာ့အန္တရာယ်အများဆုံးနေရာများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် IDG ၏အဖွဲ့ဝင် ဝန်ထမ်းများသည်
မြန်မာပြည်တွင် လုံခြုံရေးအပြည့်အဝပေးနိုင်သည်ဟု အာမခံသည်။ ဝန်ဆောင်မှုများမှာ
ကိုယ်ရံတော် နှင့် အသက်အစောင့်အကြပ်များ၊အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များကို ကာကွယ်ပေးခြင်းများဖြစ်သည်။
နည်းပညာ ပေါင်းစပ်မှု လုံခြုံရေး ဖြေရှင်းမှုများ
IDG Myanmar ရဲ့ International ဝန်ထမ်းများနဲ့ မြန်မာပြည်မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှာ Client များရဲ့ လုံခြုံရေးလိုအပ်မှုများကို လိုအပ်သည့်အတွင်း ဝန်ဆောင်မှုများပေးနေပါသည်။
IDG မှကျွမ်းကျင်ပညာရှင် မှာ Client၏ ကုမ္ပဏီတွင် အချိန်ပြည့် ဝန်ထမ်းအဖြစ်လုပ်ဆောင်ပြီး လိုအပ်သည့် လုံခြုံရေးဖြေရှင်းမှုများ စီမံပေးကာ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများကိုလည်းလိုအပ်သည့် လုံခြုံရေးသင်တန်းများနှင့်
လုံခြုံရေးခွေးများ(K9) (စောင့်ကြပ်ခြင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေသည့်လက်နက်အရာများအနံ့ခံ ရှာဖွေခြင်း)
လုံခြုံရေးခွေးများမှာ UK တွင်လေ့ကျင့်မှုများရယူထားပြီးအတွေ့အကြုံရင့်ကျပ်ပြီးစည်းကပ်ကျပ်မတ်သော
၁. EDD အဖွဲ့မှ သင်၏နေအိမ်နှင့် အလုပ်အဆောက်အဦးများသို့ ပေါက်ကွဲနိုင်သော် လက်နက်ပစ္စည်းများ
၂. လုံခြုံရေးခွေးများ မှာလည်း အဆောက်အအုံများထဲကျုးကျော်သူများ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပေးသည်။
Training (HEAT) (အန္တရာယ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သတိရှိတန့်ပြန်မှု သင်တန်း)
IDG၏ HEAT သင်တန်းမှာ အဖွဲ့အစည်းများမှဝန်ထမ်းများ ကို ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့် ကားအက်စီးဒင့် များတွင် မည်သို့ လုပ်ဆောင်ရမည်နှင့် အန္တရာယ်ရှိ အခြေအနေစသည့် ပြန်ပေးဆွဲခံရခြင်း၊ဓားစာခံအခြေအနေများ၊အသေခံဗုံးခွဲသူများ၊ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သူများ ကို မည်သို့ရှောင်ကြည်ရန် သင်ကြားပေးသည်။
IDG မှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ သင်၏ဝန်ထမ်းများနှင့် ကားသမားများကို ခုခံခြင်းနှင့် ရှောင်တိမ်းခြင်းယာဉ်မောင်း
နည်းပညာများကို သင်ကြားမှုပေးပို့နိုင်သည်။ သင်တန်းတွင် သီအိုရီနှင့် လက်တွေ့ယာဉ်မောင်းနည်းများဖြင့် ကားမောင်းနေစဉ် ကာကွယ်မှုများနှင့်ယာဉ်နှင့်ခရီးသည်များကိုကာကွယ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများပေးပို့ပါသည်။
On-site လုံခြုံရေးတည်ဆောက်မှုသင်တန်းနှင့် လိုအပ်သည့် သင်တန်းများပေးပို့ခြင်း
IDG မှ Client၏လုပ်ငန်းတည်နေရာကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီးမှ Client၏ အဖွဲ့စည်းနှင့် ပူးပေါင်းကာ လိုအပ်သည့်လုံခြုံရေးသင်တန်းများပေးသည်။
၂.ဝင်ထွက်မှုကြီးမတ်ခြင်း၊စီစစ်စစ်ဆေးခြင်း၊ Visitor များနှင့် ကွန်ထရက်ပေးထားသူများ ၏ ဝင်ထွက်သည့်နည်းစနစ်များ
၃.Body Search ပြုလုပ်ခြင်း
၄.မော်တောယာဉ်များ တွင်ရှာဖွေ စစ်ဆေးခြင်းနှင့်လုပ်ထုံးနည်းများ
၁၀. ဖြစ်ရာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ပေါက်ကွဲပစ္စည်းများနှင့် ဗုံးအန္တရာယ်များထံမှ သတိရှိကာကွယ်ခြင်း
လုံခြုံရေး စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဝန်ဆောင်မှုများ
IDG Acumen ၏ ဒေသဆိုင်ရာနားလည်မှုနှင့် ဒေသခံအကြံပေးသူများ သည် သင်၏လုပ်ငန်းပြုလုပ်နေ
သည့်နေရာဒေသများရှိ ဘေးအန္တရာယ်များကို ကြိုတင်သုံးသပ်ပြီး ထိုအန္တရာယ်များလျော့ပါးစေသည့်
IDG Acumen ဌာနမှာ လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များကို အကြံပေးပြီး သင်၏လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်
လုပ်ငန်းပိုင်ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ပေးရန်နည်းလမ်းများ လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
IDG Myanmar မှာ ဒေသခံအကြောင်းများနားလည်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အခြေအနေများကို
မြန်မာပြည်ရှိ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအခြေအနေများမှာ သင်၏လုပ်ငန်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သက်ရောင်နိုင်သည်ကိုလေ့လာစိစစ်ပြီး လုပ်ငန်းများလုံခြုံချောမွေ့စွာလုပ်နိုင်ရန်အကြံပေးခြင်းပြုလုပ်ပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မပြုလုပ်မီ ဖြစ်နိုင်သည့် စွန့်စားရမှု အန္တရာယ်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ စုံစမ်းခြင်း နှင့် စစ်ဆေးပေးခြင်းIDG Acumen မှ ကုမ္ပဏီများနှင့်ဈေးကွက်ဝင်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက်စုံစမ်းအကြံပေးမှု များပေးပါသည်။
IDG Myanmarအဖွဲ့ဝင် ဝန်ထမ်းများ
IAN DOUGLAS GORDON
IDG ကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အစောပိုင်းတွင် Ian သည် ဗြိတိသျှစစ်တပ်အရာရှိဖြစ်ပြီး စင်္ကာပူ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဂေါ်ရခါး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် လက်ထောက်ပြန်တမ်းအရာရှိဖြစ်သည်။ ဂေါ်ရခါး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ စင်္ကာပူသမ္မတနေအိမ်၊နိုင်ငံတော် ဘဏ်နှင့် ရာထူးအပ်နှံသည့်အခန်းအနားအကြီးများတွင်လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး အကြမ်းဖက်ဝါဒ တိုက်ဖျက်မှုစီမံကိန်းများတွက်လည်း ပါဝင်သည်။
Ian မှာဗြိတိသျှခြေလျင်တပ်အရာရှိဖြင့်စစ်တပ်တွင် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး စစ်မှုဝန်ထမ်းစခဲ့သည်။
ယခုတွင် IDG လုပ်ငန်းများကို လန်ဒန်တွင် ရုံးထိုင်ကာစီမံနေပြီး အလုပ်ဆိုင်ရာဖြင့်နိုင်ငံ တဝန်းခရီးသွားနေကာ စင်္ကာပူနိုင်ငံ PR ကိုင်ဆောင်ထားသည်။
GUY WINTER, PhD
Dr. Guy မှာ အီရတ်၊အာဖကန်နစ်ဆတန်၊လစ်ဗျား၊ တောင်ပိုင်းဆူဒန်စသည်တို့တွင် လုံခြုံရေးစီမံမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Guy သည် အစိုးရနှင့် စီပွားရေး Clients များကို အဖွဲ့စည်းလုံခြုံရေးပေါ်လစီများနှင့် ဗျုဟာများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ဲပြီး အရေး ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များကို အနီးကပ်လုံခြုံရေးပေးခြင်းများ စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ Guy သည်
လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ အကြီးများတွင်စီမံအုပ်ချုပ်သူနေရာပိုင်းများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး မြေနှင့်ရေပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးစီမံမှုများတွင်အတွေ့အကြုံရှိသည်။
Guy မှာ Leeds တက္ကသိုလ်တွင် စိတ်ပညာဘာသာရပ် ကို BSc နှင့် PhD ရရှိထားသည်။
Country Director of IDG Myanmar and Regional Manager, SEA
Edward သည် IDG South East Asia၏ စီမံခံခွဲမှုနှင့် ကြီးပွားတိုးတက်မှုများကို တာဝန်ခံဆောင်ရွက်သူဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်ရင်းနှီး မြှပ်နှံမှုဆိုင်ရာပိုင်းနှင့်လူသုံးကုန်အရောင်းအဝယ်များတွင် အတွေ့အကြုံရှိ၍
ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများအားနားလည်သူဖြစ်သည်။မြန်မာပြည်သို့မလာရောက်ခင် လန်ဒန်ရှိ Ageis Advisory တွင် တိုးတက်စဲနှင့် နယ်စပ်ဈေးကွက်များ ၏
နိုင်ငံရေးနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို FTSE00 ဝင် clients များနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာကုမ္မဏီကြီးများအား အကြံပေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ Edward မှာ Cambridge တက္ကသိုလ်တွင် နိုင်ငံရေး၊စိတ်ပညာနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ဘွဲ့(PPS,MA Cantab)ရရှိထားပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုစာရင်းကိုင်ပညာဘာသာရပ် ကိုလည်း Advanced ဒီပလိုမာ အား Chartered Institute of Management Accountants (CIMA Adv Dip MA,UK)
Tikaram Gurung သည်စင်္ကာပူ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဂေါ်ရခါး ရဲတပ်ဖွဲ့တွင် ၂၄ နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး
သိပ်မကြာသေးမှီမှ အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။ စင်္ကာပူ ရဲတပ်ဖွဲ့တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်တွင် သူသည် လက်နက်မဲ့လုံခြုံရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ရေးတွင် လက်မှတ်ရသင်တန်းနည်းပြဖြစ်ပြီးတုတ်တို(Baton)
စကာၤပူရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဂေါ်ရခါးတပ်ဖွဲ့ မှ “ထိန်းကျပ်မှု နှင့်တားဆီးချုပ်နှောင်မှု”အပိုင်းများတွင် ၁၅နှစ်ကြာ လက်မှတ်ရထားသည်။ သူသည် Aikido နည်းပြဖြစ်ပြီး ခါးပတ်အနက်ရထားသူဖြစ်သည်
Min Bahadur Pun သည် စင္ကာပူရဲဌာန၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင်းျဖစ်သော နီပေါစစ်သား (ဂေါ်ရခါးလူမိုး) မ်ား အဖဲြ့အစည်းမွ မကြာသေးမီမွ အျငိမ်းစားယူခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းအေတြ့အကြုံ နွင့် လုပ်သက္မွာ နွစ် (၂၀) ရွိခဲ့သည်။ စင္ကာပူရဲဌာနတြင် လုပ္ကိုင်နေစဉ်အတြင်း ဂေါ်ရခါးမ်ား၏ အဓိက ဗဟိုလုပ်ငန်းဆောင္တာမ်ားတြင် ပါဝင်ျခင်း ၊ ထိရောက္စြာ ကိုင္တြယ်ေျဖရွင်းရသည့် လုပ်ငန်းစဉ္မ်ားတြင် ပါဝင်ျခင်းမ်ား ရွိခဲ့သည်။ Mr.Min Bahadur Pun သည် စီမံခန့်ခြဲရေး ၊ အုပ္ခ်ုပ္မှုဌာန၏ လက်ထောက် တပ်ထောက်ရာထူးျဖင့် အသက်မြေးဝမ်းကေ်ာင်းျခင်း ျပုလုပ္ခဲ့သည်။
IDG Myanmar ၏လုပ်ငန်းအဓိကမှာ ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် အကောင်းဆုံး လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများ ဖြစ်သည့်ဂေါ်ရခါးများ ဖြစ်ပါသည်။ သတ္တိရှိ ရဲရင့်မှုနှင့် စည်းကမ်းဥပဒေလိုက်နာမှု အပြည့်အဝရှိသည့် ဂေါ်ရခါးများမှာဗြိတိသျှစစ်တပ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေ ကြသည်မှာ အနှစ် ၂၀၀ ကျော်နေပါပြီ။ IDG Myanmar ၏ဂေါ်ရခါးအရာရှိများမှာဗြိတိသျှစစ်တပ်၊အိန္ဒိယစစ်တပ် နှင့် စင်္ကာပူ ရဲတပ်ဖွဲ့များတွင်တာဝန်အနည်းဆုံး ၁၆နှစ်ထမ်းဆောင်ထားသူများ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့် ဓလေ့စရိုက်များကိုစစ်ဆေးပြီး IDG Group MD မှကိုယ်တိုင်စီစစ်ရွေးချယ် ထားသူများဖြစ်သည်။
၎င်းတို့၏ စစ်ဆင်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွေ့အကြုံများ ဖြင့် မြန်မာပြည်မှ IDG လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများကို ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် စီမံညွန်ကြားပေးနေပါသည်။
1B, Tharyar Shwe Pyi Housing
Tharyar Shwe Pyi Street
T. +95(0) 401 249
W. +95(0)9790 453 119
Fb. IDG Myanmar
© 2017 IDG Myanmar. All Rights Reserved.